Hiriira Oromiyaa: Mormii mootummaa moo gaaffii mirgaa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Hiriira magaalaa Jimmaatti bahame
Hiriirri ajjeechaafi buqqa'uu lammiilee mormuun magaalota Lixa Oromiyaatti eegalee kutaalee naannicha birootti babal'atee itti fufee jira.
Hiriirawwan kunneen irra caalaan nagaan xumuramanillee bakka tokko tokkotti qaamoleen nageenyaa namoota hiriira bahan irratti dhukaasuun miidhaan qaqqabuu namoonni BBC'n dubbise ni himu.
Yuunivarsitii Wallaggaa keessatti kaleessa Kibxata hiriirri bahamuuf ture dhorkamee mormii ka'een barattoonni miidhamaniiru.
Daandiiwwan magaalota Oromiyaa hiriira keessummeessuutti deebi'an
Barattuun maqaa ishee hin himanne tokko akka jettutti yeroo barattoonni hiriira nagaa ba'uudhaaf ka'ametti isaan dhorkan.
"Barattoonni hiriira kan bahuu barbaadan uummata keenya daangaa irraa buqqa'aa jiraniifi poolisoota Oromiyaa warra dhumaa jiraniif sagalee dhageessisuuf jedhanii ibsuu yaalanis hin dhaga'amne" jetti barattuun kun.
"Kanuma gidduutti humnoonni nageenyaa kaampaasii cabsanii ol seenanii barataa gara garatti bittineessanii reebuu eegalan."
Kanaanis barattoonni hedduun miidhamanii hospitaala galuu barattuun kun ni dubbatti.
Barattoota miidhamanii gara hospitaalaa geeffaman keessaa lameen isaanii rasaasaan kan rukutamaniifi garmalee akka miidhaman, Medikaal Direektarri Hospitaala Rifaraalaa Yunivarsiitii Wallagga Dr. Asaffaa Nagarii BBC'tti himaniiru.
"Ijoolleen amma wal'aansa fudhatan kudhanidha, isaan keessaa namni lama baay'ee miidhamaniiru."
"Tokko [wal'aansa baqasanii hodhuuf] galeera, warri hafan saddeet ammoo uleedhaan kan rukkutamanidha. Kana irraan kan hafe garuu lubbuudhaan kan darbe hin jiru" jedhu.
Hiriirri miilanaa maal akeeka?
Hiriirri tibbana kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bahamaa jiru siyaasa biyyattii irrattii dhiibbaa guddaa qaba jedhu xiinxalaan siyaasaa Obbo Garasuu Tufaa.
Jijjiiramni dhufe kun hanga caasaa gadiitti bu'ee hin jiru kan jedhan obbo Garasuun, kun rakkoo gara garaa uumuu dubbatu.
Akka Obbo Garasuun jedhanitti garuu hiriirri tibbanaa rakkoon jijjiirama keessatti mul'ataa jiru akka furamu gaafachuun alatti mootummaa jijjiirama kana hogganaa jiru irratti dhiibbaa gochuufi.
"Rakkoo uumame kana duuba sagalee uummataa fakkeessanii dubbii kaasuun mootummaa jijjiirama kana hogganu irratti humnoonni dhiibbaa godhan waan jiran natti fakkaata" jedhu.
"Jiijjiirama amma dhufaa jiru kana irratti dhiibbaa gochuun, diiguun, humna addaan facaasuufi rakkina uummata keessatti uumuun biyya kana rakkoo keessa galchuudha malee waanta bu'aa tokkollee buusu hin qabu," jedhu Obbo Garasuun.
Goodayyaa suuraa Hiriira magaalaa Hoolataatti Wiixata bahame ture
Hiriirri amma bahamaa jiru ajjeechaafi buqqa'uu uummataaf xiyyeeffannaan haa kennamu kan jedhu malee, mootummaan kun naaf hin taane kan jedhu miti kan jedhu ammoo rogeessafi dhimma siyaasa Oromoo irratti kan dubbatu Lammii Beenyaati.
Haa ta'u malee yeroo uummatni hiriira bahuufi gaaffii gaafatu qaamotni dantaa addaa qaban gara ofiitti haqaaquu danda'us jedha.
Biyya kana keessatti walitti quba qabuun aadaa baratamedha kan jedhu Lammiin, "duuchaatti qaama jijjiirama kana hin feenetu hiriira kana duuba jira jechuun fudhatama hin qabu" jedha.
"Mootummaan gaaffii uummatni tokko lama jedhee gaafatuuf deebii hatattamaa kennuu qaba. Kun tokkoffaa mootummaan amantaa uummataa akka argatu godha, lammata ammoo qaamota gaaffii uummataa gugatanii okkara uumuu fedhanitti karra cufa" jedha.
'Tasgabbiin ni barbaachisa'
Rakkoolee amma dura hin hiikamne hiikuudhaaf mootummaan adeemsa irra jira kan jedhan Obbo Garasuun, waan ta'eefis tasgabbiin ni barbaachisa jedhu.
"Uummanni tasgabbiidhaan rakkinoota hiikamuu qaban bakka jiranitti hiikaa mootummaa kanas gargaaree rakkinni kun akka hiikkatu gochuudha."
Uummanni gaaffii gaafatee obsaan mootummaa irraa deebii eeggachuun barbaachisaadha kan jedhu Lammii Beenyaa, Mootummaanis hatattamaan deebii kennuu qaba jedha.
Hiriirawwan kunneen gara okkaraatti akka hin jijjiiramnes humni nageenyaa tarkaanfii fudhachuu osoo hin taane inumaa nama hiriira bahe tiksu qabas jedha Lammiin.
"Uummanni jijjiirama kana hin qisaasu"
Jijjiirama amma biyyattii keessa jiru uummanni akka salphaatti qisaasa jechuun sirrii miti, sababni isaas ijoollee isaa itti dhabe waan ta'eef jedha Lammiin.
"Qeerroon amma daandiitti deebi'an kun, humna guddaa sana dhiibanii kan jigsan dhiiga isaaniitiini. Dhiiga isaniin waan argatan kana akka salphaatti qisaasu jedhanii eeguun sirrii miti" jedha.
Haa ta'u malee uummati daandiitti bahee jirus gama isaatiin, mootummaanis gama isaatiin itti gaafatamummaa jiru bahachuun, "qaamni biraa akka gidduu hin seenne itti daangessanii, jijjiiramni qabatamaan akka dhufu tumsuu qabu jedha.